सपना पुरा हुन दिन्न – महन्थ ठाकुर ! « Bagmati Online
सपना पुरा हुन दिन्न – महन्थ ठाकुर !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । ठाकुरले यो गलत भएको भन्दै यो प्रकरणमा आफूहरु कानूनी उपचारमा जाने बताए ।
आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै ठाकुरले ओली सरकार ढल्न नदिने बताए। उनले उपेन्द्रको चाहना पूरा हुन नदिने र पार्टीमा बहुमत आफूसँग रहेको बताए।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो गलत भएको भन्दै यसमा कडा आपत्ति जनाए । आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो प्रकरणमा आफूहरु कानूनी उपचारमा जाने विश्वास दिलाए ।
उपेन्द्र यादवसँग यसरी खनिए महन्थ ठाकुर (भिडिओसहित)